Ticketmaster app inobatana neApple Music kuti tizive zvatinofarira | IPhone nhau
Ticketmaster app inobatana neApple Music kuti tizive zvatinofarira
iOS yakavharwa kwazvo system, asi zvave zviripo nekusvika kwe iOS 10 apo vakomana vanobva kuCupertino vaona kuti havagone kuramba vachivhara munhu wese. Nekuda kweizvi, kwave nemaAPIs mazhinji akaburitswa, chimwe chinhu chinobatsira munhu wese, vanogadzira, vashandisi uye iyo kambani pachayo inoona masisitimu ayo ekushanda achivandudza zvakanyanya.
Nhasi tinokuunzira mhinduro yeapp iyo yakangoshandisa imwe yeAPIs yakaburitswa Apple gore rapfuura, tinotaura nezve Apple Music API, API yawakangoshandisa Ticketmaster kuvandudza app yako ... Uye ndeyekuti iyo Ticketmaster app ichangobva kuvandudzwa kuwana kusangana pamwe neApple Music kuti urambe uchiziva zvese nemakonsati evatinofarira maartist.
Ehezve, kutanga pane zvese kukuudza izvozvo parizvino iyi yekuvandudza yaburitswa muUnited States cheteMuSpain tichazofanira kumirira kwenguva yakati rebei, uye kunyangwe tiri kutaura nezvekambani imwe chete, Ticketmaster, mukupedzisira nyika yega yega inyika uye ndidzo dzinopa mafambiro anosarudza nzira yavo yekushanda. Asi kune izvo isu zvataienda, Ticketmaster yeIOS achangowana kusangana neApple Music, mubatanidzwa unouya neiyo gadziridza 1.10.2 uye izvo zvichatibvumidza isu kuti tizive kuti makonsati evatambi vatinoteerera zvakanyanya achave.
Rutsva runonakidza rwataive tatoona nemashandisirwo akadai sengano Last.fm izvo zvakaita kuti tirambe tichizivana nevose maartist atinoteerera mune chero inoyerera mimhanzi sevhisi, tinogona kunyange kuwiriranisa mimhanzi yatakatamba nemaPods edu nesocial network. Chinhu kubva mumaonero angu chinonakidza kwazvo, sezvo mune yangu nyaya Ndave kuenda kumakonzati mazhinji nekuda kwekuti masevhisi aya akandizivisa apo vatambi vangu vandaida vaitamba. Tikiti yaita zvakanaka kwazvo, kwete chete ivo vanokuzivisa iwe nezve konzati asi ndivo zvakare vanokutengesera matikiti, saka tese tinohwina ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Ticketmaster app inobatana neApple Music kuti tizive zvatinofarira
Apple yaKurume Chiitiko: Nyowani iPads uye ... iPhone 7 uye 7 Plus muRutsvuku?